आविष्कार केन्द्र भित्र डा.महावीर पुन र इन्जिनियरको पर्यो बबाल कु’स्ती पछारापछार नै गरे,जित पुनको कि सिंहको(भिडियोसहित) – Nepali Taja Khabar
आविष्कार केन्द्र भित्र डा.महावीर पुन र इन्जिनियरको पर्यो बबाल कु’स्ती पछारापछार नै गरे,जित पुनको कि सिंहको(भिडियोसहित)
आविष्कार केन्द्रका महावीर पुन र केन्द्रमा कार्यरत इन्जिनियर संजयबहादुर सिंहबीच कु’स्ती परेको छ ।आविष्कार केन्द्रमा भएको कु’स्तीमा पौ’ढ पुनले युवा इन्जिनियर सिंहलाई न’राम्ररी प’छारेका छन् ।
कु’स्तीको भिडियो सार्वजनिक गर्दै महावीर पुनले आफूहरुबीचको कु’स्ती अमेरिकाको भन्दा क’म नभएको बताएका छन् ।उनले आफू २५ वर्षे युवाहरुसँग बारम्बार कु’स्ती खे’ल्ने गरेको बताउँछन् । अरु युवाहरु हा’रे पनि सञ्जय भने उनीसँग बारम्बार नि’हुँ खो’ज्न आ’इरहने उनको भनाई छ ।
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा विभिन्न प्राविधिक सामग्रीको अनुसन्धान र अ’न्वेषणमा लागेका महावीर पुन र उनको टी’म बेलाबेला यस्ता र’माइला क्रि’याकलाप गरिहन्छन् ।भिडियो सहित उनि लेख्छन -लु हर्नुहोस्, विश्व प्रसिद्ध कु’स्ती अमेरिकाने कु’स्ती भन्दा कम छैन ।
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा मनोरंजनको लागी खे’लिएको म र ईन्जिनियर संजयबहादुर सिंहको कु’स्ती अनुसन्धानको साथै बेला बेलामा यस्तो कु’स्ती २५ बर्षेहरु संग खेल्छु। अरु त सबै हारी सके तर संजय भाई भने अझै नि’उ खोज्छ । महावीर र सञ्जयबहादुरको कुस्तीः– हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस :
लु हर्नुहोस्, विश्व प्रसिद्ध कुस्ती ? अमेरिकाने कुस्ती भन्दा कम छैन. राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा मनोरंजनको लागी खेलिएको म र ईन्जिनियर संजयबहादुर सिंहको कुस्ती. अनुसन्धानको साथै बेला बेलामा यस्तो कुस्ती २५ बर्षेहरु संग खेल्छु. अरु त सबै हारी सके तर संजय भाई भने अझै निउ खोज्छ ? pic.twitter.com/49v1v1adpP
— Mahabir Pun (@MahabirPun) February 15, 2021
यो पनि,,,सरस्वती पूजा आज, यसरी गर्नुहोस् विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा (विधीमन्त्रसहित) ॐ ॐ ॐ । सबैको जय होस् ।काठमाडौं ।प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन श्रीपञ्चमी पर्व वि’द्याकी देवी सरस्व’तीको पूजा आराधना गरी मनाइन्छ ।
ऋतुह’रुको राजा वसन्तको सुरुवात हुने दिन भए:काले आजको दिनलाई वसन्त पञ्चमी पनि भनिन्छ । वसन्त ऋतु आगमनको उपलक्ष्य:मा राष्ट्राध्यक्षले वसन्तपुर गई वसन्त श्रवण गर्ने परम्परा छ।
एक:पटक ऋतुराज वसन्त:लाई अन्य पाँच ऋतुले आठ/आठ दिनसम्म भेट गरेका थिए । पाँच ऋतुले गरी ४० दिन भेट गरे:काले वसन्त ऋतु सुरु हुने चैतकृष्ण प्रतिपदाभन्दा ४० दिनअघि माघ शुक्ल पञ्चमीकै दिन वसन्त पञ्चमी मनाउन थालि:एको हो । यसै समयदेखि वसन्तराग गाउन थालियो ।
सङ्गीत, कला, साहित्य र विद्याकी खानी सरस्व:तीको आज विधिपूर्वक पूजा आरा:धना गरी स्तोत्र पाठ गरेमा पढ्न आउँछ भन्ने धार्मिक विश्वास छ । आजकै दिन साना बालबालि:कालाई अक्षरारम्भ गराइन्छ । सरस्वतीलाई महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक्, शारदा, आर्या, ब्राह्मी, काम:धेनु, वेदगर्भा, धीश्वरी नामले समेत सम्बोधन गरिन्छ ।
श्वेत वस्त्र धारण गरेकी, गोरो वर्णकी, सदा मुस्कुरा’इरहेकी, सर्वोत्तम रत्नद्वारा नि’र्मित आभूषणले सुशोभित भएकी, चतुर्भुजा भएकी जसमध्ये पहिलो हातमा वीणा, दोस्रो’मा पुस्तक, तेस्रोमा स्फटिकको माला र चौथो हा’त अभय मुद्रामा रहेकी राजहंसमा सवार भएकी देवी सरस्वती हुन् भनी शास्त्रमा बताइ:एको छ । विशेषगरी शैक्षिक संस्थामा विद्या’र्थीले महत्वका साथ यो पर्व मनाउँछन् ।
बौद्ध धर्मावलम्बी’ले पनि सरस्वतीलाई बो’धिसत्व मञ्जुश्रीका रुपमा ज्ञानको प्रतीक मानेर पूजाआजा गर्छन् । यस दिन बिहानै भक्तिपूर्वक कलश स्थाप:ना गरी पञ्चोपचारले गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव आदि देवताको पूजा गरी सर:स्वतीको पूजा गरिन्छ । सरस्वतीलाई नैवेद्यका रुपमा नौनी, दही, दूध, धानको लावा, तिलको लड्डु, नरि’वलको जल, मूला, बयर, बेल, अदुवा अर्पण गरिन्छ ।
सरस्व’तीलाई सेतो रङ्ग, फूल, चन्दन, शङ्ख आदि प्रिय लाग्ने भएकाले आजका दिन पूजामा यी सामग्री चढाउ’ने गरिन्छ । पूजापछि सरस्वतीको ध्यान र ‘श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा’ मन्त्र जप गरिन्छ । यो मन्त्रलाई विद्या, बुद्धि र सौभाग्य प्रदायक मानिन्छ ।
यसपछि सरस्वती कवच पाठ गरिन्छ ।पूजन’विधि वसन्त पञ्चमीको दिन विधिवि’धानका साथ देवी सरस्व’तीको पूजा गर्दा विद्या र बुद्धिका साथसाथै सफलता पनि पाइन्छ । बिहानै उठेर नुहाइसकेपछि पवित्र आ’चरण र वाणीको संकल्प लिँदै माता सरस्वतीको पूजा गर्नुस् । पूजामा चन्दन, अक्षता, से’तो र पहेंलो फूल, सेतो चन्दन र सेतो वस्त्र देवी’लाई चढाउनुस् । प्रसादमा पहेंलो चामल, खीर, दूध, दही, मक्खन, सेतो तिलको लड्डु, घिउ, नरिवल, सक्खर र मौसम अनुसा’रको फल चढाउनुस् ।
अनि माता सरस्व:तीसँग बुद्धि र सफ:लताको कामना गरेर घिउको दियो बाल्दै आरती गर्नुस् । पढाइमा मन नलाग्ने विद्यार्थीहरूले देवी सरस्वतीको नित्य पूजन गरेमा अति:शीघ्र लाभ पाउँछन् । मा:ताको प्रतिमाअघि उभिएर तल लेखि’एका श्लोक उच्चारण गर्दा स्मरण शक्ति बढ्छ अनि सबै म:नोकामनाहरू पूरा हुन्छन् ।
सरस्वती स्तुति या कुन्देन्दुतुषारहा:रधवला या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरद:ण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। या ब्रह्माच्युत’शंकरप्रभृतिभिर्देवैस् सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निस्शेषजाड्यापहा ।।१।।शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा(पुस्तक(धारिणीमभयदां जाड्यांध’कारपहाम्। हस्ते स्फाटिकमा’लिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भग:वतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्।।२।।
मूल मन्त्र’द्वारा देवी सरस्वतीको पूजा प्रत्येक देवीदेव’ताको एक मूल मन्त्र हुन्छ । यही मन्त्रबाट उनीह’रूको आवाहन गरिन्छ । यी मन्त्र विशेष रूपमा सिद्ध हुन्छन् । देवी सरस्व’तीको अष्टाक्षर बीज मन्त्र हो – श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा ।
देवीको पूजा गर्दा तथा नैवे’द्यादि अर्पण गर्दा यस मन्त्रको जाप गर्नुपर्छ । अनि सरस्वती पूजन’को सम’यमा तल लेखिएका श्लोकले भगव’तीको ध्यान गर्नुस् :सरस्वती शुक्लवर्णां सस्मितां सुमनोहराम्।।
कोटिचंद्रप्रभा’मुष्टपुष्टश्रीयुक्तविग्रहाम्। वह्निशुद्धां शुकाधानां वीणापुस्तकमधारिणीम्।। रत्नसारेन्द्रनिर्माणनव’भूषणभूषिताम्। सुपूजितां सुरगणैब्र्रह्मविष्णुशिवादिभि:।। वन्दे भक्त्या वन्दिता च मुनीन्द्रमनुमानवै: ॐ
सुटुक्क दोस्रो बिहे गर्दागर्दै जेठी श्रीमती विवाह मण्डपमा आएपछि भागा’भाग (भिडियोसहित)